Inona no tena dikan'ny "Marketing Context"? | Martech Zone
Talata, Aprily 5, 2016 Alarobia, Aprily 6, 2016 Charlotte Ziems
Amin'ny maha olona iray nanao asa aman-draharaha noho ny atiny, ny serasera ary ny fitantarana dia manana toerana manokana ao am-poko aho ho an'ny anjara asan'ny "tontolon-kevitra." Izay ifandraisantsika - na amin'ny raharaham-barotra na amin'ny fiainantsika manokana - dia tsy misy ifandraisany amin'ny mpihaino fotsiny rehefa takatr'izy ireo ny sahan'ilay hafatra. Raha tsy misy ny sahan-kevitra dia very ny dikany. Raha tsy misy ny sahan-kevitra dia very hevitra ny mpijery momba ny antony ifandraisanao amin'izy ireo, ny zavatra heverin'izy ireo halaina, ary, amin'ny farany, ny antony tsy ifandraisan'ny hafatrao amin'izy ireo.
Ny retargeting no ohatra mahazatra (ary manafintohina indrindra) amin'ny gaffe amin'ny sehatry ny orinasa. Raha misy zavatra nojerenao taloha dia manaraka anao hatrany hatramin'izao na mbola liana ianao na tsia. Ny fahitana doka ho an'ny kiraro rehefa mijery tranokala aho ho an'ny tanjona ara-barotra dia tsy mandeha amin'ny laoniny, tsy ao anaty resaka. Saingy maro ny lesoka manodidina ny zava-mitranga ao amin'ny resaka fifampiresahana — rehefa misy zavatra nolazainao nahatonga ny bika na fisavorovoroana dia fantatrao fa tokony hanolotra toe-javatra misimisy kokoa momba izay lazainao na angatahinao ianao.
The Oxford English Dictionary mamaritra ny teny hoe "teny manodidina" toy izao:
Ireo toe-javatra mandrafitra ny toe-javatra, fanambarana, na hevitra, ary amin'ny lafiny mety hahavitany izany nahatakatra ary nanombatombana: ny fanapahan-kevitra dia noraisina tao anatin'ny nomanina fihenan'ny fandaniana
Ny ampahany amin'ny zavatra voasoratra na niresaka avy hatrany mialoha ary araho ny teny na andalan-teny iray ary hanazava ny dikany: fanodinana teny voakasik'izany ny toe-javatra nisehoan'ny teny
Ka raha mampihatra ny famaritana ny sahan-kevitra amin'ny fampiharana marketing isika, izay misy ny "marketing" fampitana hafatra manokana amin'ny mpihaino, dia mila mijery tsara izay mialoha na manaraka ny fandefasana ny hafany ny mpivarotra. Farafaharatsiny raha tadiavin'izy ireo ny mpihaino hahatakatra ny dikany na ny maha-zava-dehibe ny zavatra ampitainy.
At Sitecore, lasa lavitra izahay nilaza fa ny mpivarotra sy ny mpitarika dizitaly dia tsy mahay mitantana ny zava-niainan'ny mpanjifa raha tsy amin'ny marketing izy ireo amin'ny fifandraisan'ny mpanjifa amin'ny marika misy azy ireo. Betsaka ny workflow amin'ny automatisation marketing no manandrana amin'ny marketing marketing (ohatra, raha misintona taratasy fotsy ny mpanjifa, dia misy mailaka alefa amin'izy ireo mailaka roa herinandro aty aoriana). Fa ny olana amin'ireo sehatra marketing automatique maro dia ny fiheverana ny mailaka fotsiny no raisin'izy ireo. Tsy raisin'izy ireo izay mety ho nataon'ny mpampiasa taorian'ny fisintomany taratasy fotsy. Ahoana raha mandany ora maro amin'ny tranokala izy ireo? Sa mibitsika momba ny taratasy fotsy ny ampitso? Tsy te-hanaraka haingana kokoa noho ny tapa-bolana ve ianao?
Ny marketing amin'ny tontolon'ny fahombiazana dia mitaky mihoatra ny azon'ny automatisation marketing. Mino izahay fa mila teknolojia ahafahana miasa telo:
Ny fahafahana manangona faharanitan-tsaina momba izay ataon'ny mpihaino anao, na aiza na aiza misy azy, alohan'ny manatona azy ireo ianao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, hoy ny OED, inona no mialoha ny andalovanao.
Ny fahafahana tantano ny atiny nomerika, na andalan-teny, izy tenany. Ary raha manana mpanjifa be dia be ianao dia azonao antoka fa afaka manao an'io amin'ny ambaratonga mora foana ianao.
Ny fahafahana alefaso izany atiny izany na aiza na aiza misy ny mpanjifanao, amin'ny fitaovana rehetra, amin'ny fomba mandeha ho azy ka ny hetsika mpihaino efa voafaritra mialoha dia mitarika ho azy ny fandefasana ny atiny. Ary mitranga amin'ny fe-potoana voatondroinao izany. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia voafehinao ny zavatra hitany ary rehefa hitan'izy ireo izany raha toa ka milaza aminao ny fahaizanao ny zava-niainany momba ny zavatra niainany fa vonona handany izay tokony hatolotrao izy ireo.
Tsotra ihany, tena izy, saingy ny teknolojia afaka manatanteraka azy dia sarotra kokoa. Nanoratra momba ny varotra toe-javatra izahay tao amin'ny boky vao navoaka, antsoina hoe “Marketing amin'ny Context ho an'ny Dummies. ” Niara-niasa tamin'i Wiley Press izahay (izay mamoaka ireo boky malaza "For Dummies" hitanao ao amin'ny fivarotam-boky) ary mamorona azy io:
Ny fiovan'ny mpanjifa niomerika ary ny antony niovan'ny fanantenan'izy ireo marika
Ny fomba hanampian'ny marketing ara-bola anao hahatratra ireo andrasan'ny mpanjifa ireo
Izay ilainao amin'ny haitao marketing mba hanomezana anao ny fampanantenan'ny varotra toe-javatra
Misy bebe kokoa, fa ireo no fanalahidin'ny fanalahidy. Manantena izahay fa tianao izany, ary nomeko anao ny momba ny boky momba anao mba hahitanao ny sandany amin'ny fampidinana azy. Rehefa dinihina tokoa, tsy lavitra an'ity mpivarotra atiny ity ny mifampiresaka tsy misy resaka. Ampahafantaro ahy ny hevitrao momba ilay boky amin'ireo hevitra etsy ambany!
Ampidino ny marketing Context ho an'ny Dummies
Tags: teny manodidinavarotra toe-javatramarketing ho an'ny dummiesmarketing ara-nofodummiessitecoreWiley
As VP an'ny marketing amin'ny atiny Sitecore, Lehiben'ny famoahana, Charlotte dia manara-maso ny paikady sy ny fandrafetana ny fananana atiny ao anatin'izany ny ebooks, ny horonan-tsary ary ny taratasy fotsy izay maneno sy manome lanja ny mpanjifa Sitecore sy ny vinavinany. Mafana fo izy amin'ny fahazoana ny filan'ny mpihaino sy ny fanamby tahaka ny momba ny Sitecore sy ny tontolon'ny haitao marketing.
Apr 9, 2016 amin'ny 6: 45 AM
Lahatsoratra tena tsara, Charlotte. Ity atiny ity dia manome hevitra mazava momba ny atao hoe marketing marketing sy ny fomba hitondrana ny marketing amin'ny atiny ho amin'ny dingana manaraka. Tena hanaraka ny rohy ary hizara ny zavatra niainako taorian'ny famakiana ity boky ity.